Uyenza njani i-moodboard: yintoni na kunye namanyathelo alula ukuyila | Abadali be-Intanethi
Uyenza njani ibhodi yemood
Xa siyila, sibonisa into esifuna ukuyithetha. Le nkqubo ingaba nzima kwaye iyabiza ngokwexesha, kuba idinga uhlalutyo olunzulu ukuze yonke inkqubo yokucinga, oko kukuthi, yonke inkqubo ehambelana nomzobo kunye noyilo lokuqala, ichanekile.
Ukwenza le nkqubo yonwabe ngakumbi, uhlobo lobuchule lwayilwa oluququzelela kwaye lwashwankathela lonke uhlalutyo kwizinto ezahlukeneyo zegraphic kunye nezinto ezibonakalayo. Obu buchule buye babizwa ngokuba yi-Moodboard kwaye namhlanje yinxalenye yoyilo lwegraphic njengoko lukuyilo lophawu.
Kule post Siza kuthetha nawe malunga nobu buchule bumangalisayo bunikezelayo kunye nendlela eyilwe ngayo. Ukuba ufuna ukunciphisa ixesha lakho ngokwemigaqo yoyilo kwaye usebenzise ezinye iinjongo ezikunceda ukuba ufezekise injongo yakho yokuqala yeprojekthi yakho, awunakuphoswa yintoni elandelayo.
1 Mood board: yintoni
1.1 Yenzelwe ntoni
2 Indlela yokuyila ibhodi yesimo
2.1 Iingqikelelo okanye amagama achaza umsebenzi
2.2 Khangela izinto ezikuncedayo.
2.3 Cinga ngezinye iinkalo
2.4 Khetha kwaye uqale ukuyila
2.5 inkqubo yokuphela
3 Izixhobo zokuyila i-moodboard
3.1 hamba ibhodi mood
Mood board: yintoni
ibhodi mood uchazwa njengoluhlobo lobuchule bokubonwayo okanye isixhobo. Zininzi iindidi zeebhodi zeemo kodwa zidla ngokuboniswa ngokwasemzimbeni okanye ngokwemizobo. Ihlala ihambelana nento esiyaziyo njengekholaji, kodwa ihamba ngaphaya kwekholaji elula.
Kungumxube wazo zonke iingcamango kunye nezigqibo esizifumene kwisigaba esibanzi sokuhlalutya. Ukuze uqonde ngcono, sisiphumo soko konke ukuqhula kwengqondo esiye saba nako ngexesha lenkqubo yokuhlela.
I-moodboard ineenjongo zeprojekthi ezahlukeneyo, kodwa ezinye zazo zihlelwa ngolu hlobo:
Sisixhobo ekwaziyo ukuguqula izimvo zethu (iingcinga) ngendlela yemizobo okanye izinto ezibonakalayo. Ishwankathela yonke into esinayo engqondweni yethu kwaye inikezela ngemilo ethile, umbala kunye nokwakheka.
Iyaboniswa loo nto xa siyila i-moodboard intsimi yethu yokuyila iyanda. Kwaye ayisiyonto yomlingo, kodwa endaweni yoko sisebenza inxalenye yengqondo yethu ezinikele ngokukodwa kubuchule bokuyila kunye nomsebenzi wobuqu. Yinto eqikelelwayo ukuze kugxothwe kwi-moodboard, ukuyila kunye nobuntu bomyili ngokuchasene nomyalezo afuna ukunxibelelana.
Ukuba ukwisigaba soyilo apho uye wamisa kwaye awukwazi ukufumana indlela yokuphuma, uyilo lwebhodi yesimo sengqondo luhle ngolu hlobo lwemeko. Masithi yindlela yokuphila yokudodobala kobugcisa, ekubeni kunceda ukucacisa kakuhle iingcamango nokuzicwangcisa nokuzifakela kwidrowa yazo ehambelanayo.
Xa siyila i-moodboard, kufuneka siyenze icace kwaye siyazi into esiyithumelayo okanye sidlulisa umyalezo kubaphulaphuli bethu abaza kuwubona. Yiyo loo nto i-moodboard kufuneka iyilwe ngendlela yokuba yenziwe ngabom. Ukubekwa kunye nolandelelwano lwazo zonke izinto kufuneka zilandele izikhokelo ezithile kunye nesizathu. Ngenxa yesi sizathu, asikwazi ukucinga ngokungaqhelekanga, kuba inkqubo kufuneka ibe ngumgca kwaye ihambisane nazo zonke iingcamango esinazo ezingqondweni zethu.
Ngamafutshane, luhlobo lwegumbi apho zonke iintlekele zethu zengqondo zilungelelaniswe.
Indlela yokuyila ibhodi yesimo
Iingqikelelo okanye amagama achaza umsebenzi
Into yokuqala ekufuneka siyithathele ingqalelo yeyokuba imoodboard yethu iza kusekelwa phezu kwayo, ngabaphi abaphulaphuli, ngayiphi injongo, ngowuphi umxholo esiza kuwusebenzisa. Ukuphendula yonke le mibuzo kufuneka senze uluhlu olubanzi kunye neengqikelelo ezisisondeza kwimpendulo ecacileyo. Ezi ngcamango zinokuba kufutshane okanye zikude kwiprojekthi yethu okanye oko umthengi akufunayo. Kucetyiswa ukuba ubhale phantsi inani elipheleleyo leekhonsepthi eziphambili ezili-10 kwaye ukhethe phakathi kwezi-5 zokuqala. Okukhona usongeza kancinci, kokukhona kuya kuba lula kuwe ukuba wenze isigqibo kamva, kodwa izimvo ezimbalwa oya kuba nazo. Okukhona ubhala phantsi, kokukhona kuya kuba nzima ukukhetha, kodwa kokukhona uya kuphuhlisa izimvo zakho kamva. Uyakhetha.
Khangela izinto ezikuncedayo.
Into ephambili elungileyo esebenzayo ukuqalisa ukuboniswa kwezimvo zakho zokuqala, ngokungathandabuzekiyo yimifanekiso. Imifanekiso zizinto ezibonwayo zegraphic, ezithi, ngenxa yolwakhiwo kunye nemibala equlethwe nguwe, unokuqalisa ukuba nombono oqikelelweyo wento ofuna ukuyibonisa. Ngenxa yesi sizathu, kubalulekile ukuba ube neqoqo lemifanekiso, kungekhona ebanzi kakhulu, kodwa xa ufumana ngakumbi, uya kuba neengcamango ezininzi.. Enkosi kulo msebenzi wengqondo, wongeza ubuchule bakho kwaye amathuba okusondela kwinjongo yakho yokugqibela ayanda.
Cinga ngezinye iinkalo
Xa sithetha ngezinto, sibhekisa kuzo zonke ezo zinto zinokuba ngumzobo okanye ngokwasemzimbeni kwaye ezinokukunceda kwinkqubo yokuyila. Kwi-moodboard kubalulekile ukuba, ukongeza kwimifanekiso, wenze ukhangelo olubanzi lwezinye izinto ezinje ngothungelwano, ii-inki zechromatic, iifonti ezinokukunika umlinganiswa ofanelekileyo nofanelekileyo weprojekthi yakho kunye nethoni yomyalezo. ufuna ukunxibelelana. Ngamafutshane, musa ukuhlala nento enye, njengoko kubalulekile ukuba ugcine engqondweni zonke ezinye.
Khetha kwaye uqale ukuyila
Nje ukuba zonke izinto zibekwe kwitafile yedesika yakho okanye kwikhompyuter yakho, lixesha lokuba uqale ukhetho lokugqibela kunye nenqanaba lokugqibela lokulahla. Ngenxa yesi sizathu, kufuneka ulahle kwaye ushenxise ezo zinto zingakuncediyo, kodwa akwanelanga ukuziphelisa, kufuneka ube nesizathu esicacileyo omele ucinge ngaso ngaphambili. Ngamanye amaxesha, ezona bhodi zemood zingcono zenziwe ngezinto eziphinda zisetyenziswe kumgqomo, oko kukuthi, ngezinto ezilahliweyo kodwa, ngotshintsho oluncinci, zibe zizinto ezibalulekileyo kwimoodboard yakho.
Ukuba ufikelela kwesi sigaba sokugqibela, kungenxa yokuba sele uzikhethele ezo zinto ufuna ukuzibona zimelwe kwibhodi yakho yemood. Yiyo loo nto kwinqanaba lokugqibela, kufuneka uzibeke ngolungelelwano. Umyalelo owenziwe ngothotho lwemizobo phambi kwesiphumo sokugqibela kwaye kuya kufuneka wenze isigqibo sokuba yeyiphi omawuyikhethe. Nje ukuba uyilwe i-moodboard, kufuneka uyibonise. Ukuyibonisa, kubalulekile ukuba ubonise inkqubo oyilwe ngayo, kuba kubalulekile ukuba uluntu lwakho okanye umxhasi aqonde apho zonke ezi zinto zivela khona.
Izixhobo zokuyila i-moodboard
hamba ibhodi mood
Ngesi sixhobo, uya kukwazi ukuyila iibhodi zemo ye-intanethi. Ibonakala ngokuba sisixhobo ekulula ukusiphatha. Ukongeza, awudingi ukwenza iakhawunti yangaphambili, okanye ubhalise okanye ungene. Ngesi sixhobo ungaqala ukuyila ngaphandle kwengxaki. Ibonelela ngothotho lweetemplates ezingenanto ukuqala ukusuka ekuqaleni okanye ukuba uyathanda, nawe unothotho lweetemplates esele ziyilelwe ukusetyenziswa okunokwenzeka kwakho.
I-Niice sesinye sezixhobo zeenkwenkwezi zokuyila ii-moodboards, ibonakaliswe kudidi olubanzi lwemifanekiso enayo, ngale ndlela, uya kukwazi ukuzikhuthaza kwaye wenze ii-moodboards ezilungileyo kakhulu onokuthi ucinge. Enye into ye-Niice ekufuneka ithathelwe ingqalelo kukuba inolwandiso lweChrome, ekuvumela ukuba ugcine kwaye ukhuphele imifanekiso ngelixa ukhangela i-Intanethi. I-interface yayo ilula kakhulu ukuyisebenzisa, konke okufuneka ukwenze kukutsala izinto ezinomdla kuwe kuhlobo lwesithuba esingenanto. Ngaphandle kwamathandabuzo, sesinye sezona zixhobo zibalaseleyo zokuqalisa ukuyila.
I-Canva ayikwazanga ukuphosakela lo mbhiyozo wemibala kunye nokuthungwa. Sesinye sezona zicelo zisetyenziswa kakhulu kwi-intanethi ngabaqulunqi abaninzi kunye nabasebenzisi.. Ukongeza, inekhathalogu ebanzi yeetemplates ezikhoyo, uninzi lwazo simahla, kwaye ezinye ziyiprimiyamu. Ayinayo itemplates kuphela, kodwa unokufikelela kwiifonti ezininzi ezaziwayo kunye nemibala emininzi. Kufuneka nje ubhalise nge-imeyile okanye nge-akhawunti yakho ye-Facebook kwaye unokonwabela uluhlu olubanzi lweenkonzo ezinikezelayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, sesona sixhobo sisetyenziswa kakhulu kwiminyaka yakutshanje.
Kwaye asinakushiya ecaleni isixhobo seenkwenkwezi sokuyila kunye nenkuthazo kwi-Intanethi. IPinterest sele inabasebenzisi abangaphezu kwesigidi esi-1. Kwaye akumangalisi kuba inikezela ngothotho lweebhodi zokuyila ezilayishwe imifanekiso kunye nemifanekiso ukuze ikukhuthaze. Ukuqala inkqubo yakho yokuyila, kufuneka wenze ibhodi yakho yokuqala, udweliso lwenkqubo luzakugcina ngokuzenzekelayo ezo zinto zinomdla kuwe kwaye kwi-injini yokukhangela yokuqala iya kukubonisa ezo ziyilo ezifanayo kwaye zisondele kwizinto othanda ngazo. Ngaphandle kwamathandabuzo ummangaliso.
Ukuyila ibhodi yesimo sengqondo akufani nokuyila ikholaji elula. Kodwa, njengoko siye sakwazi ukuqinisekisa, i-synthesis kunye nolandelelwano olunengqiqo lwazo zonke izinto ezenza iprojekthi yethu. Abaqulunqi abaninzi bakhetha ukuyila iibhodi zabo zemood ngokwasemzimbeni kwaye bazenze zibedijithali.
Ngale ndlela banokudlala isandla sokuqala kunye nezinto, bathinte ukuthungwa kwabo kwaye babone imibala ngendlela yangempela. Yindlela elungileyo yokukhusela ngcono iprojekthi yakho.
Awusenaso isizathu sokuba uqalise ukuyila, kuba sinethemba lokuba zonke iingcebiso kunye nezixhobo esizicebisile ziya kuba luncedo olukhulu kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyenza njani ibhodi yemood
Ndingayazi njani iPantone yombala?